Soo dejisan GameRanger 1.0.0.0 – Vessoft
Soo dejisan GameRanger
GameRanger – madal ciyaarta taasoo simulates network dalwaddii deegaanka si ay ciyaaraan ciyaaraha kala duwan ee internet-ka ah. Software wuxuu taageeraa kulan badan oo caan ah, oo ay ku jiraan FIFA, Call of Duty, Baahan u Speed, Diablo, Warcraft, Gariirkii iwm GameRanger kuu ogolaanayaa inaad isku xiro qolka abuuray ama la abuuro aad server u gaar ah ciyaar gaar ah. Software waxuu inay xaddido helitaanka qolka abuuray, inay ku wada xiriiraan chat iyo liiska saaxiibo ku dari isticmaala. GameRanger sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad la qabsato saamaynta dhawaaqa, beddela midabka qoraalka, si ay u madoow ee ku darto users iyo maareeyo software adigoo isticmaalaya hotkeys.
Khayaadka oo ka mid ah hab ciyaar on shabakad maxalliga ah
Dad badan oo kulan la heli karo in uu ciyaaro
Waxay abuurtaa ama isku xira qolalka ciyaaro
Isgaarsiinta ee chat ka
Fursado dheer account ah
Comments on GameRanger:
GameRanger Software la xiriira:
Games software The waxtar leh waxaa loogu talagalay dadka kulan ciyaaro. software The kuu ogolaanayaa inaad bedesho in kulan, heerka, tiro ka mid ah nolosha, lacag, hub, iwm
العربية, English, Українська, Français... Dolphin 4.0.2 iyo 4.0.8700 rc
العربية, English, Français, Español... Minecraft 1.8.9
Games Ciyaarta ayaa ku caan ah si uu u dhiso dhismayaasha kala duwan ee adduunka abuuray blocks ah. Ciyaaryahanka ayaa heli ah u hababka kala duwan ee ciyaarta iyo beddelka badan si ay u baahiso fursadaha.
Horumarinta Software ee horumarinta ciyaarta ee nidaamyada hawlgalka kala duwan iyo ciyaaraha consoles'ka. Waxaa jira taageero ah sawiro 3D iyo nidaamka animation awood badan.
Games Kulankaan ayaa kaarka lacag la'aan ah nooc ka mid ah istiraatiijiyadda. Kulankaan ayaa set ka mid ah kaararka sixir la geesiyaal halyeeyga caalamka Warcraft ah.
English, Français, Español, Deutsch... Xfire 2.44.761
Games Chat software The universal waxaa diiradda lagu saaray ciyaartoyda kulan network. software The kuu ogolaanayaa inaad si toos ah chat ee ciyaarta, qabsadaan video iyo hadli ee chat cod.
Games Tool in ay la shaqeeyaan kulan ka Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 kulan u tacsiyeeyaan. Modio kuu oggolaanayaa in aad edit faylasha iyo helitaanka database ee kulan badbaadiyey oo dunida ku baahsan.
العربية, English, Français, Español... Wise Registry Cleaner 9.31 Standard iyo Portable
Ayna System Ku haboon qalab si aad u nadiifiso oo ay tayadoodii nidaamka. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad si nabad ah uga saarto files kala duwan ee ka soo diiwaanka oo ku jira module raad raac.
العربية, English, Українська, Français... GoToMyPC 8.3.1611